Anti Vandal Chinja
Kwete / yekuzvivhara-yega switch
DC Simba Jack
6.35 Runhare Jack
AC Power Outlet Chigadziko
Terminal Zvikwepa / pcb Terminal Block
Fiyuzi Mubati / Bhatiri Chinobatanidza
Simba Window Chinja
Chigaro hita chinja
Iyo simbi bhatani inogadzira inoziva iyo yesimbi bhatani switch
Seimwe yeanowanzojairika maindasitiri michina, simbi bhatani switch yakashandiswa zvakanyanya muChina. Vamwe vanhu vanogona kunge vasingazive zvakawanda nezve masimbi switch switch, uye ruzivo rwemasimbi mabhatani anotibatsira kuti tibate mabhatani esimbi mune ramangwana. Chii chinonzi simbi bhatani switch? Simbi bhatani chinja pu ...
Tsananguro yekumisikidza kwetemu muzviridzwa mabhokisi
Nekuvandudzwa kwesimba remagetsi, mashandisirwo emagetsi ari kuwedzera gore rimwe nerimwe, uye kune akawanda marudzi emitsetse yedhizaina, kabhodhi uye terminal. Kuti uve nechokwadi chekuchengetedzwa kwemagetsi, mutsara wekupedzisira unoshandiswa zvakanyanya uye unofanirwa kubhadhara zvakanyanya ...
TOP 10 YEMAHARA DZIMWE DIMMER ANOGONESESA 2020
1. Smart Dimmer Shandura, Inorerekera Waya Inodikanwa, Treatlife WiFi Mwenje Shandura yeDimmable LED, Halogen Smart app remote control: gadzirisa mwenje wemba yako kuburikidza neapps pane yako smartphone kana piritsi kubva chero kupi, chero nguva; yakanakira kana iwe usiri pamba kana kana iwe ugere pane yako inodziya sof ...
KeroKuvaka 9 Hongxian RD, Hongqiao, Yueqing Guta, Zhejiang, China